37ème SYNODE GENERAL DU 02 AU 04 NOVEMBRE 2018 A BORDEAUX
«Sitrano ny marary, atsangano ho velona ny maty, diovy ny marary hoditra, roahy ny demony; nahazo maimaimpoana ianareo, koa manomeza aimaimpoana.» Matio 10. 8 DIEM.
Ny Teny Faneva dia sady manambara drafitrasa hotanterahina amin’ny ho avy, no milaza ihany koa ny fiainan’ny Fiangonana araka izay efa nananganan’Andriamanitra azy sy ny andraikitra napetrany taminy. Hita taratra ao anatin’ny Teny Faneva araka izany ny zava-misy efa iainana sy atrehina, sy ny fikasana lehibe mbola hatao amin’ny ho avy. Tsy azo hadinoina na oviana na oviana ny Firehana Teôlôjika, antom-pisiantsika FPMA, araka izay natsangantsika tany aloha: «Fiangonana manao asa Misiona mba hitondra fanasitranana ary hizara fiainana be dia be (Communion en Mission pour la guérison et partager la vie en abondance)». Hiatrika ny Fankalazana an’Andriamanitra noho ny faha-60 taona ny FPMA isika, raha sitrapon’Andriamanitra, amin’ny taona ho avy. Vitantsika ve ny andraikitra nomena antsika? Tsy ny aretin’ny nofo ihany, fa misy dia misy koa ny aretin’ny fanahy izay manodidina antsika; tsy ny fahafatesana ara-nofo ihany, fa ny ady tsy maintsy hatao ho amin’ny fahavelomana miaraka feno amin’Andriamanitra; tsy ny aretin-koditra ara-nofo ihany, fa indrindra koa ny sary aman’endrika ahitan’ny mpitazana ny toetrantsika ivelany; ary azontsika odian-tsy hita ve ny asan’ny devoly mamely ny Fiangonana ka loharanom-pikorontanana sy mandrava ny fifankatiavana izay marika ahafantarana fa mpianatry ny Tompo tokoa isika?
Niasa foana sy mbola miasa tsy tapaka ary te hiara-miasa amintsika mandrakariva Andriamanitra. Ny Tenin’Andriamanitra izay hanina mahavelona tokony hofikirantsika dia mampahatsiaro fa nomena be dia be isika: «Voazarazara ho samy hafa ny fanomezam- pahasoavana, nefa ny Fanahy Masina dia iray ihany. Voazarazara ho samy hafa ny fanompoana, nefa ny Tompo dia iray ihany. Voazarazara ho samy hafa ny asa, nefa Andriamanitra dia iray ihany, loharano ipoiran’ny asa rehetra ao amin’ny olona rehetra. Samy omena fanomezana maneho ny Fanahy Masina ny olona tsirairay ho fanasoavana ny daholobe. »1 Korintiana 12. 4-7
Miandry ny asa fijoroantsika ho Vavolombelona izao tontolo izao. Tsy tokony hijanona ho zazavao amin’ny finoana isika, lany andro amin’ny resabe sy nofinofy fotsiny, fa mba ho tena olon-dehibe mahatratra ny fahafenoan’ny ohatry Kristy! Alao hery àry ry FPMA, «Koa amin’izany, ry havako malala, aoka ianareo hiorina mafy, tsy ho voahozongozona, hahefa bebe kokoa hatrany eo amin’ny asan’ny Tompo, satria fantatrareo fa tsy foana tsy akory ny fisasaranareo amin’ny fanompoana ny Tompo.» 1 Korintiana 15. 58
Paris, Foiben’ny FPMA, 18 Oktôbra 2018 Ny Filohan’ny FPMA,